च्याम्पियन्स लिग: बार्सिलोनाको शानदार जित, लिभरपुलले बायर्नलाई हरायो | Makalukhabar.com
सीपीएलमा सन्दीप बार्बाडोसबाट खेल्ने, भए महँगो मूल्यमा 'विक्री'
काठमाडौं, ९ जेठ । नेपाली बलर सन्दीप लामिछाने क्यारेबियन प्रिमियर लिग सीपीएलमा बार्बाडोस ट्रिडेन्टबाट खेल्ने भएका छन् । अघिल्लो संस्करणमा सेन्ट किट्स एण्ड नेभी प्याट्रियोट्सबाट खेलेका सन्दिपलाई यस पटक बार्बाडोसले किनेको हो । सन्दीपलाई बार्बाडोसले ७० हजार अमेरिकी डलरको स्लटमा अनुबन्ध गरेको हो । त्य... जारी राख्नुहोस...
खैरहनीमा मेयर कप फुटबल हुँदै
जेठ ८, चितवन । चितवनको खैरहनी नगरपालिकामा दोश्रो मेयर कप फुटबल प्रतियोगिता जेष्ठ तेस्रो सातादेखी सुरु हुने भएको छ । खैरहनी नगरपालिकाको आयोजना तथा युवा स्वर्ण तारा क्लबको सह आयोजनामा यही जेष्ठ १६ गतेदेखि मेयर कप फुटबल हुन लागेको हो । प्रतियोगितामा नगरको १३ वटा वडाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी एक एक टोल... जारी राख्नुहोस...
मेस्सीको कप्तानीमा अर्जेन्टिनाको टोली घोषणा
एजेन्सी । कोपा अमेरिका फुटबलका लागि लियोनल मेस्सीको कप्तानीमा अर्जेन्टिनाले टोलीको घोषणा भएको छ । मंगलबार राति प्रशिक्षक लियोनल स्कालोनीले प्रशिक्षणमा रहेका ४० खेलाडीबाट अन्तिम २३ सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेका हुन् । सन् २०१६ को कोपा अमेरिकाको फाइनलमा अर्जेन्टिना चिलिसँग पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित भएक... जारी राख्नुहोस...
काठमाडौं, ७ जेठ । मलेशिया र चाइनिज ताइपेविरुद्धको दुई अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलका लागि आज नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोलीको घोषणा गरिएको छ । नेपाली राष्ट्रिय टोलीका मुख्य प्रशिक्षक योहान कालिनले विराज महर्जनको कप्तानीमा २३ सदस्सीय नेपाली टोलीको घोषणा गरिएको हो । नेपालले आगामी जुन २ मा मलेशि... जारी राख्नुहोस...
युरोपियन गोल्डेन बुटको रेसमा मेस्सीलाई रोक्लान् त एम्बापेले ?
एजेन्सी, जेठ ६ । जारी सिजन युरोपियन गोल्डेन बुट दौडमा बार्सिलोनाका कप्तान लिओनल मेस्सी र फ्रेन्च क्लब पिएसजीका युवा फरवार्ड केलियन एमबाप्पेबीच प्रतिस्पर्धा देखिएकोमा मेस्सीले एम्बापेलाई पछि पारेर गोल्डेन बुटमा आफ्नो स्थान पक्का गरेका छन् । गएराती लालिगाको अन्तिम खेलमा एइबारलाई २–२ को बराबरी ग... जारी राख्नुहोस...
स्वारेज र बेन्जिमालाई पछि पार्दै मेस्सीले जिते पीचीची अवार्ड
एजेन्सी । बार्सिलोनाका कप्तान लियोनल मेस्सीले पीचीची अवार्ड जितेका छन् । स्पेनिस ला लिगा फुटबल च्याम्पियनमा आइतबार राति लिगको अन्तिम खेलमा दुई गोल गरेका मेस्सी सर्वाधिक गोलकर्ता बन्दै अवार्ड हात पार्न सफल भएका हुन् । मेस्सीले यो सिजन ला लिगामा ३६ गोल गरे भने अन्य प्रतियोगितामा गरि क्लवका लागि ५०... जारी राख्नुहोस...
ला लिगा: रियाल मड्रिड अन्तिम खेलमा बेटिससँग पराजित
एजेन्सी । स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा रियाल मड्रिडले हारसँगै यो सिजन समाप्त गरेको छ । सिजनको अन्तिम खेलमा बेटिससँग पराजित हुँर्दै रियालले ला लिगाको यात्रा समाप्त गरेको हो । घरेलु मैदान सान्टीयागो बर्नाबेउमा रियालले अपेक्षाकृत नतिजा निकाल्न सकेन । पाहुना टोली बेटिसले दोस्रो हाफमा आक्रामक खेल प्रदर्शन... जारी राख्नुहोस...
बायर्नले लगातार जित्यो सातौँ लिग उपाधि
एजेन्सी । बायर्न म्युनिखले जर्मन बुन्डेस लिगा फुटबलको उपाधि जितेको छ । शनिबार राति भएको लिगको अन्तिम खेलमा बायर्नले फ्रान्कफर्टलाई ५–१ गोलले हराउँदै उपाधि जितेको हो । उपाधि रक्षा गरेको बायर्नको यो लगातार सातौँ लिग उपाधि हो । घरेलु मैदानमा भएको एकपक्षीय खेलमा बायर्नलाई जिताउन किंग्सले कोम्या... जारी राख्नुहोस...
युवा क्रिकेटर सन्दिप भन्छन्, 'राज्यले वातावरण बनाए अझ प्रगति गर्छौ'
चितवन, ४ जेष्ठ । कम उमेरमै क्रिकेटकै कारण चर्चा बटुलेका नेपाली टोलीका सदस्य सन्दिप लामिछानेले दुई पटक विश्वकै महंगो प्रतियोगिता इन्डियन प्रिमियर लिग आईपिएल खेलिसकेका छन् । आईपिएल मात्र नभई उनले अन्तराष्ट्रिय स्तरका थु्प्रै प्रतियोगिता खेलेर अनुभव बटुलिसकेका छन् । विदेशी भुमीमा खेलेको अनुभव र त्यहाँ... जारी राख्नुहोस...
युरोकपका लागि स्पेनको टोली घोषणा, को को परे टीममा ?
एजेन्सी । सन् २०२० को युरोकप छनोटका लागि स्पेनले २३ सदस्यीय फुटबल टोलीको घोषणा गरेको छ । शुक्रबार राति घोषणा गरिएको टोलीमा मिडफिल्डर सान्टी काजोर्लाले चार वर्षपछि स्थान बनाएका छन् । उनी यसअघि चोटका कारण बाहिर थिए । स्पेनिस टोलीको गोलरक्षकमा डेभिड डी गिया, केपा अरीजाबलगा र पाउ लोपेज छन् ।रक्षकमा डानी... जारी राख्नुहोस...